Zuva: Chivabvu 5, 2020
Nekuda kwesimba majeure nekuda kweiyo hutachiona hweCorona, kumiswa kwezvibvumirano kana kunonoka kwekubhadhara kwakakurukurwa. Nekudaro, iyo yekubhadhara waranti yeEurasia Tunaki, Osmangazi uye Yavuz Sultan Selim mabhuruji akaitwa zvizere. Kubva kuSÖZCÜ kune nyaya yaYusuf Demir [More ...]
Kuyeuchidza kuti kunogona kuve nekushomeka kweanoshanda kunyangwe pasina chirwere chisingaperi chinoperekedza vanhu vanopfuura makumi matanhatu Dr. Yaşar Küçükardalı, kurasikirwa kwezera rino, [More ...]
Usaregeredza kutarisa kumanikidzwa kwetayi yemotokari yako yakamiswa
Motokari dzedu dzakamirira mupaki mumazuva ano kana zvichikosha kuti usabude mumba kunze kwekunge zvichisungirwa nekuda kweCOVID-19 denda. Kudya zvakanaka, kugadzirira mazuva atichatangazve uye kumirira matairi emota dzakamiswa [More ...]
Pollen Allergy, Asthma uye Covid-19 Kutapukira Kunoratidza Sei?
Muzvinafundo Dr. Ahmet Akçay akaenderera mberi akati: Kazhinji [More ...]
IATA Yakakurudzira Kumanikidza Mask Use muVhiza
Sangano reInternational Air Transport Association IATA, iyo inomiririra ndege dzepasi rose, yakakurudzira kupfeka masks ekumanikidza ndege dzinodzivirira kupararira kwehutachiona hwe corona apo ndege dzinotangazve. David, gurukota rezvekurapa reInternational Air Transport Association [More ...]
Yechipiri Hike Pamusoro Gasi
Energy Mafuta Anopa Mitambo Yevashandirwi Vashandi 'Union (EPGİS) yakazivisa kuti mutengo we5 kurus wakagadzirwa pamutengo wepeturu. Hamba ichauya nhasi manheru ichakanganisa mutengo wepombi. Saka peturu mumazuva maviri [More ...]
Bazi rezvekurima uye sango rakawedzera chimiro chitsva nehutachiona mukudzidziswa kwekurima nekuparadzira zviitiko zvevarimi, varimi uye vagari vemusango. "Agriculture Sango, iyo yakavakwa nehunyanzvi hwekudzidzisa kure, [More ...]
Mumabasa maviri akateedzana akaitwa muIstanbul nebazi rezvekutengeserana, zvikwata zveCustomer Enforcing, zviuru zvinomwe nemazana mashanu nemazana mashanu nemazana manomwe nemakumi matatu nemazana matatu maseru ekurapa akakosha mamirioni mazana matatu Istanbul Airport Tsika Enforcing Kupaza uye [More ...]
Gurukota rezvemaindasitiri pamwe neTekinoroji, VaMustafa Varank, vakataura kuti mafekitori ese ane mota anokanganisa kugadzira maficha achaenderera mberi nemabasa musi waMay 11, achiti, "Pane zvakakosha kuitika kumberi kwekugadzira. Mazhinji mafekitori ane motokari akadaro [More ...]
Balıkesir Gar Mugwagwa Waive Wakasvibira
Mabasa ekudyara anopedzwa pane imwe nzira njanji inofema yekufambisa iri pakati peguta nezvikwata zveBalıkesir Metropolitan Municipality. Gar nzira; sycamore, linden, zino knot muti, muti womusidhari, dicle marshmallow muti, privet, lilac [More ...]
Iyo yekupedzisira bend yakapinda muBozzepe Road
Ordu Metropolitan Municipality inoenderera mberi nekuyedza kuita kuti vafambe kuenda kuBoztepe nehurefu hwemamita mazana mashanu nemakumi mashanu ekunyaradza kweguta. Mumugwagwa we 530 km wakashandiswa kusvika Boztepe, uyo unogamuchira zviuru zvevashanyi vekuno uye vekunze gore rega rega. [More ...]
Mabhazi ane Bhatiri Yekutakura Zvishandiso Yakatangwa muAntalya
Metropolitan Municipality yaputsa nzvimbo itsva mukufambisa kwemadhorobha muAntalya. Zvishandiso zvekufambisa mabhasiketi kubatanidza mabheji eparuzhinji makumi maviri neshanu emabhazi eMetropolitan Municipality uye kukurudzira kushandiswa kwemabhasikoro [More ...]
Vapfuuri veMafambiro Ekutepfenyura Vanogadziriswa Vakaremara Kufambisa MuIstanbul
IMM inoenderera mberi nekuedza kwayo kuongorora nguva yakatarwa yekuzivisa mazuva matatu uye kuziva zvirongwa zvayo nekukurumidza. Inokodzera vanhu vakaremara uye inotora nguva uye yakaremara kupinda [More ...]
Kambani yeTurkey Yapi Madinah Yekumhanyisa Yechitima Chiteshi mukati mekukwira kweiyo 450 km marefu Haremeyn High Speed ​​Chitima Project, iyo inobatanidza maguta eMecca, Jeddah, King Abdullah Economic Guta neMedina, iyo yapera muSaudi Arabia. [More ...]
Mari Yakabhadharwa Nemabhiriji uye Migwagwa Yakuru Yakavimbiswa
Sözcü Azar Cigdem Toker akanyora kuti imarii yekubhadhara kubva kune yakachengeteka yenyika kune mabhiriji ayo anovimbiswa kupasa. Toker akacherekedza kuti mutoro webhiriji padanho remwedzi mitatu mwedzi ingangoita mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe emamirioni. Toker nemabhiriji [More ...]
Kushanda Hupenyu muMumvuri weCorona
Hutachiona hwe corona, hwakaitika muWuhan, China uye hwakachinjisa nyika yese kubva muna Zvita wadarika, yakauya pamwe chete nezviitiko zvakawanda zvinotorwa. Vanhu vari kutora yavo yekuchenjerera nenyaya dzekuwedzera [More ...]
Feverish Basa paNeighborhood Roads muKonya
Konya Metropolitan Municipality inoenderera mberi nemabasa ayo ekusimudzira miganho yemigwagwa yepedyo mumatunhu yakabatana neMetropolitan City mushure meMutemo mutsva weMetropolitan. Konya Metropolitan Meya Uğur İbrahim Altay neNew Metropolitan Law [More ...]
117 Zviuru Masks zvakagoverwa muZuva kubva kuMaskemics
Iko maskematic application yeIzmir Metropolitan Municipality yakaita kuti zvive nyore kune vagari kuti vawane mask yekurapa yemahara. Kubva Muvhuro, Chivabvu 19, zana nemakumi mairi nemazana matatu nemakumi matatu masks zvakagoverwa pakati pemasculinists pamatanho e4. İzmir Metropolitan Municipality, 117 [More ...]
ASELSAN's Denizözöz AHTAPOT System Yakagadzirira Duty
Denizgözü-AHTAPOT system yakagadzirirwa zvakananga mapuratifomu echikepe achifunga nezve izvo zvinodiwa Naval Command's Electro-Optical Diffuser (EOD) Sisitimu uye yakagadzirwa kuti ishandiswe munzvimbo yeiyo ASELFLIR-300D system, iyo yakaunzwa kare. [More ...]
Zvidzidzo Zvakawedzera muBelek uye Kadriye Ruzhinji Mabhichi
Bazi rezvetsika uye Tourism rinosimudzira basa raro kumahombekombe eruzhinji emahombekombe iro raanoronga kupedzisa nemwaka uno wezhizha. Belek Public Beach, Kadriye Public Beach uye Promenade uko Ministry yakapedza hurongwa hwayo [More ...]
ALO 170 Zvakanyanya Kuverengera İŞKUR
Family, Labor and Social Services Minister Zehra Emerald Selcuk, March 11, zuva rokutanga coronavirus nyaya kuonekwa Turkey, munguva kusvikira pakuguma April yakawedzera 170 muzana kuuya zvinoda ALO 160 4.8 [More ...]
Ministry yeImukati Mukati Inotenderedzwa Magavhu Kutenderera Kwechekuguta Kupinda uye Kubuda Mahara
Ministry of Interior yakatumira denderedzwa pane makumi masere neshanu Magavhuna e "Guta Kupinda / Kunze Measure". Na denderedzwa, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Istanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, [More ...]
Yechipiri Yekutsigira Package yeVadzidzi Kujoinha LGS Yakadhindwa
Chikwangwani cheMai Mubvunzo wekutsigira, chine mibvunzo 1000, chakaburitswa kutsigira gadziriro yevadzidzi vanozopinda bvunzo yepakati mukati meiyo High School Transition System (LGS). Iine rutsigiro rwakaburitswa muna Kubvumbi [More ...]
Maitiro Ekuita 2020 LGS Center Exam ..! Heano Shanduko Dzose
Kuongorora kwepakati mukati meiyo chiyero che High School Pass System kuchaitwa 20 Chikumi 2020. Matanho mazhinji achave aripo panguva yekubvunzwa kwehutano hwevadzidzi. Kekutanga gore rino, vadzidzi vachakwanisa kuwana zvivakwa zvebvunzo zviri nyore. [More ...]
ASELSAN naBıçakcılar vakasaina chibvumirano chekudyidzana kuti vagadzire mwoyo mapapu emwoyo unoshandiswa pakuvhiyiwa kwemwoyo pachena munyika. Muchina wemapapu wemwoyo ndeye moyo unoshanda-yakawanda uye basa remapapu mukuvhurwa kwemoyo kwakavhurika. [More ...]